လက်ပန်းတောင်းတောင်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
"အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်မယ် ကျွန်မတို့ရဲ့ တင်ပြချက်တွေမှာ နိုင်ငံရဲ့ရည်ရှည်အကျိုးစီးပွား၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ရည်ရှည်အကျိုးစီးပွားနဲ့ ဒီမိုကရေစီခိုင်မာရေးရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေကို ကျွန်မတို့ကြည့်ရမယ် "
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အခုလို ပြောကြားခဲ့တာပါ။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်နဲ့ ပြည်သူတွေကို အသိပေးရမယ့် တာဝန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ဆက်ပြောပါတယ်။
"ကျွန်မတို့ မြင်ရင်မြင်တဲ့အတိုင်းတင်ပြမယ်၊ လူတိုင်းကိုကျေနပ်အောင် ဆိုတာလုပ်လို့မရပါဘူး၊ ကော်မရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ လူတိုင်းကို ကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ ကော်မရှင်တစ်ခုရဲ့ တာဝန်မဟုတ်ပါဘူး၊ ကော်မရှင်ရဲ့ တာဝန်ဟာ အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့၊ ဒီအမှန်တရားကို အခြေခံပြီး နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံး၊ တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ တင်ပြဖို့ပါ"
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ကော်မရှင်အနေနဲ့ အစိုးရရဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ တာဝန်ယူမှုအတွက် တင်ပြချက်ထဲမှာ ထည့်သွင်းသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အနေနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေက လွဲပြီး သတင်းထောက်တွေကို သီးသန့်တွေ့ဆုံဖြေကြားမှာ မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်တဲ့အခါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပပြီး ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သပိတ်စခန်းဖြိုခွဲခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အဖြေပေါ်မှသာ ထုတ်ပြန် အသိပေးသွားမယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူတွေတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်လာပြီဆိုယင် နောက်ကွယ်မှလူတွေ ပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီး အစိုးရမှ အမြဲလိုလိုပြောနေတာ အမှန်ဘဲလား။ အစိုးရနှင့်ပြည်သူဘာတွေ ကွာဟသလဲ လက်ရှိအစိုးရဟာ ဘယ်နိုင်ငံကနေလာပြီး တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာလဲ။ အစိုးရဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တာမြန်မာပြည်သား။ မြန်မာပြည်ဖွားတွေမဟုတ်ပါလား။ ဘာကြောင့်များ မြန်မာပြည်ရဟန်းရှင်ပြည်သူတွေကို အနိုင်ခံပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတာလဲ တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တယ် ပြည်သူကိုချစ်တယ်ဆိုရင် ရဟန်းရှင်ပြည်သူတွေရသင့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။
Dec 07, 2012 08:52 AM
တရားဥပဒေအရအသက်ညှာဆုံးဆောင်ရွက်လိုက်တာပါဆိုတော့ အသက်ညှာဆုံးဖြေရှင်းတာတောင် ဒီလောက်ရက်စက်ကြမ်းတမ်းလွန်းတယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ဟာ မခန့်မှန်းရဲလောက်အောင်ပါပဲဗျာ
နေရပ်- behs2dagon) (
We all people in Burma always respect you and rely on your truthfulness. We TRUST you. You are our SAVIOUR!!!
Dec 07, 2012 06:50 AM
Daw Suu, you’re absolutely right and hero of heroes in Myanmar. We love the truth. Who are benefited this project? We, people of Myanmar or Burma, have no profits. We’re lost all our natural resources that have sent to China, and Myanmar authority has imposed guns and ammunitions from China. They’ve used all guns and ammunitions to suppress to all indigenous peoples including Burmese in Myanmar. As the result, we are still too much poor under the military government suppression.
Dec 07, 2012 02:05 AM
ဘာဖြစ်လို. မြန်မာနိုင်ငံကို ပျက်စီးယိုယွင်းအောင်လုပ်ပြီးမှ ဟိုဘက်ဒီဘက် ပြသနာတိုင်းကို လူပ်ဆောတဲ.အစိုးရ ဖြေရှင်းဖို.ကျ အမေစုဆီ အားလုံးပုံအပ်ကြတာလဲ
Dec 06, 2012 06:49 PM